Stranger အရာများသည် Netflix's World Rim of World တွင်ဂြိုလ်သားများကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည် - Netflix မူရင်း
Trailer: သူစိမ်းအရာကမ္ဘာ့ Netflix ရဲ့အနားကွပ်အတွက်ဂြိုလ်သားကျူးကျော်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
အဆိုပါစုန်းရာသီ2ထွက်လာပါဘူး
Stranger Things - Duffer Brothers ကိုတရားစွဲဆိုခြင်းသည်တရားစွဲဆိုမှုကျဆင်းသွားခြင်းမရှိ၊ Spider-Man - Far From Home သည် Disney Plus သို့ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ
Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင် Rim of the World ၏ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရာများရှိသည်။
Netflix သည်သူတို့၏မူလရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုမျှဝေခဲ့သည် ကမ္ဘာ၏အနားကွပ် , ဤရုပ်ရှင်နှင့် Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပြပွဲအကြားတူညီအနည်းငယ်ကြည့်ဖို့လွယ်ကူသည်, သူစိမ်းများ။ နောက်တွဲယာဉ်ကိုအခြေခံပြီး ကမ္ဘာ၏အနားကွပ် အသွင်အပြင်နှင့်ခေတ်သစ်နေ့ကကဲ့သို့ခံစားရသည် သူစိမ်းများ တစ် ဦး အလယ်၌ လွတ်လပ်ရေးနေ့ -style ဂြိုလ်သားကျူးကျော်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာကလေးလေးယောက်ဟာနွေရာသီစခန်းကိုသွားတယ်။ အဲဒီမှာသူတို့ကစခန်းနဲ့သိပ်ဝေးတယ်၊ ဂြိုလ်သားများကမ္ဘာမြေကိုကျူးကျော် လူ့ယဉ်ကျေးမှုတိုက်ခိုက်ခံရချိန်တွင်ကလေးလေးယောက်သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Miya, Cech, ဂျက်ဂိုး၊ Benjamin Flores Jr. Andrew Bachelor နှင့် Alessio Scalzotto သရုပ်ဆောင်များပါဝင်သည်။ Netflix ၏ The Babysitter အပေါ်သူ၏အလုပ်အတွက်လူသိများသော McG သည် Zack Stentz မှဇာတ်ညွှန်းရေးသည့်အခါရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။ Collider ။
ကမ္ဘာ၏အနားကွပ် မေလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် Netflix တွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး Netflix ပရိတ်သတ်များသည်ဤမူလရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားသင့်သည်။ ၎င်းသည် Netflix ၏အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ရန်အလားအလာရှိသည်!
နောက်ထပ်:၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Netflix ကိုဖျက်သိမ်းပြီးသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်
များအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ထွက်စစ်ဆေးပါ ကမ္ဘာ၏အနားကွပ် အောက်မှာ!
ကြံစည်မှုလျော့နည်းနဲ့တူပုံပေါ်နေစဉ် လူစိမ်းများ၊ ဒီရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဂန္ထဝင်၏နံပါတ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ အဆိုပါ Goonies, လွတ်လပ်ရေးနေ့, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုက်ခိုက်ပါ နှင့်ပိုပြီး။ ဤနည်းအားဖြင့်ရုပ်ရှင်သည်တူညီသောသွေးကြောများတွင်အတူတကွအားထုတ်မှုကဲ့သို့ခံစားရသည် သူစိမ်းများ။
ahs ရာသီ9လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ဒီရုပ်ရှင်ကကောင်းတယ် ငါလအထိ ဦး ဆောင်မယ့်အကြောင်းအများကြီးကြားနာသတိရပေမယ့်အသစ်သောရုပ်ရှင်နှင့် Netflix သို့ ဦး တည်ပြပွဲ၏တစ်လအတွက် ကမ္ဘာ၏အနားကွပ် ငါကြည့်ဖို့အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ငါအားလုံးလမ်းခင်းသူအပေါင်းတို့သည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနှင့်ဖန်တီးသူမှဂုဏ်ပြုတဲ့လွမ်းဆွတ်ရုပ်ရှင်အကြောင်း, ဤရုပ်ရှင်နှင့်တူအလွန်ခံစားရတယ်။
ပိုကောင်းခေါ်ဆိုခကိုရှောလု Netflix ကျွန်တော်တို့ကို
Netflix သည်အတိတ်ကဤအရာကိုများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်မျှော်လင့်မိသည် ကမ္ဘာ၏အနားကွပ် ကြောင်း၏အခြားဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Netflix ရုပ်ရှင်ကို Netflix မှာဖြန့်ချိဖို့သင်စောင့်နေစဉ်၊ McG ရဲ့အခြားရုပ်ရှင်ကို Netflix မှာကြည့်သင့်သည်။ ကလေးထိန်း ဒါဟာနောက်တွဲယာဉ်ကဒီရုပ်ရှင်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကြည့်ရတာကျေနပ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသောအခါ Netflix ရုပ်ရှင်အကြောင်းသင်ပိုမိုသိစေလိုသည်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
နောက်တစ်ခု:မေလ ၂၀၁၉ မှာ Netflix မှာကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၂၅ ကား
ဖျက်သိမ်း korra ၏ဒဏ္seasonာရီရာသီ 5
Bates မိုတယ်ရာသီ4netflix လွှတ်ပေးရန်
netflix ရာသီ 1 အပေါ်အရှက်မရှိသော
အသစ်ကမိန်းကလေးရာသီ6netflix လွှတ်ပေးရန်